Safarka megangelyo-doonka ee Finland wuxuu noqon karaa mid qaal ahi, nafsad ahaan adag islamarkaasna halis ah - Asylum in Finland
Wadada megangelyo-doonku ku imaanayo Finland waa mid dheer oo inta badanna qaali ah. Safarada iyo ka gudbinta xuduudaha ee sharci darada ah waa kuwa inta badan jir ahaan iyo nafsad ahaanba culus, sababtoo ah waxaa la xiriira khataro waaweyn:
Safarkaadu wuxuu noqon karaa mid halis ah- gaar ahaan haddii aad miciinsato mukhallasiin. Mukhallasiintu waxey Yurub keenaan dadka doonaya in ay megangelyo codsadaan iyagoo dooman caagag ah oo aad u buuxa soo saaraya islamarkaasna soo marsiinaya badda Meditareeniyanka. Sanadihii la soo dhaafay waxaa iyagoo ka soo gudbaya badda Meditareeniyanka ku qaraqmay ama lagu la’yahay kumanaan dad ah oo isku dayay in ay Yurub megangelyo-doonnimo u soo galaan.
Ku safridda dhulku waa halis marka ay mukhallasiintu kula socdaan. Sababtoo ah waxa laga hadlayo waa tahriibin sharci darro ah oo wadan looga gudbayo mid kale, mukhallaska marka la qabto waxoow wajihi karaa xukun-xabsiyeed daran. Sidaas darteed ayaa dadka loogu daabulaa tusaale ahaan baabuurta xamuulka ee waaweyn iyo kuwa xamuulka ee yaryar. Halista in safarka lagu dhinto waa mid weyn.
Haddii uu qoyskaadu kula socdo
Waxaa kale oo jira halista ka ganacsiga dadka iyo rabshad.